Umatshini ojikelezayo wamalaphu abenzi kunye nabanikezeli - China iRoller Blinds Fabric Factory
Iimfama zeMveliso eziQinisekayo eziMnyama ziSemi eziMnyama zokuFa
I-Sunetex Semi Blackout Roller Blind Fabric yenziwe nge-100% ipholiyesta enomgangatho ophezulu kunye nabalinganiswa abalungileyo. Ngombala wobuso obunombala obumbeneyo wendlela yokunxiba eyenza ukuba ibe nefuthe elifanelekileyo ekugcineni ukukhanya kunye nokukhuselwa kwabucala. Izinto ezisemgangathweni zepolyester ezinokuyenza ibe yomelele, kungabikho mngundo, kungabikho nundu, kungabikho deformation, akukho mkhondo emva kokusetyenziswa kwexesha elide.
I-Sunetex Roller Blind Blackout Fabric ithandwa kakhulu phakathi kwabathengi bethu, inezinga eliphezulu lokuthenga kwakhona. Iimveliso zethu zikumgangatho olungileyo kunye nexabiso elifanelekileyo. Sine-MOQ ephantsi kuwe. Ke, nokuba ubungakanani bakho bukhulu okanye bincinci, sinokwenza ishishini nawe. Ngomgangatho olungileyo kunye nenkonzo ebalaseleyo, siyakholelwa ukuba sinokuba ngumthengisi owomeleleyo kuwe. Kwaye ngentsebenziswano yethu yokuqala, sinokunikela ngeesampuli zasimahla kuwe ukujonga umgangatho kunye nombala.
I-China Decor yabucala eyiRoller Blind Fabric Semi emnyama
Ilaphu leSunetex uJacquard Semi-Blackout Roller Blinds Ilaphu liyakhuphisana kakhulu. Yinto entle nefashoni. Ngendlela yokudibanisa yobuso obuphindwe kabini, iimveliso zethu zincinci. Ilaphu lethu liyadlula, elinokwenza igumbi lakho likhanye. Ngaphandle uyayibona imbonakalo yelizwe kuba icinyiwe. Sineentlobo ngeentlobo zamalaphu onokukhetha kuwo. Zonke iimveliso zethu zikumgangatho olungileyo kunye nexabiso elifanelekileyo.
Iimveliso zethu ziyonwabela inqanaba lokuthenga kwakhona phakathi kweemveliso zethu. Singumvelisi oqeqeshiweyo kumalaphu amakhethini. Sine-MOQ encinci, ukuba iodolo yakho inkulu, siya kukucwangcisela imveliso, iya kufuna malunga neentsuku ezingama-30 ukuyivelisa. Ukuba iodolo yakho incinci, ungakhathazeki, sinesitokhwe esiqhelekileyo sokuthengisa izinto ezishushu. Siyakhuphisana kwimpahla eneenkcukacha. Sinokubonelela ngeesampulu zasimahla zakho ukuba ujonge umgangatho kunye nombala.
Iimoto eziValiweyo ze Window shutter Blinds
Ilaphu le-Window Shutters Blinds Ilaphu elenziwe ngeemoto lenziwe nge-polyester esemgangathweni. Imveliso egqityiweyo yenye yezona zinto ziphambili. Sinemibala eyahlukeneyo kunye nobubanzi obahlukeneyo kukhetho lwakho. Into nganye inenkangeleko entle kunye nomgangatho olungileyo. Kwaye inesakhono esihle sokufota kwaye inefuthe elifanelekileyo lokungenisa umoya, elungele ukusetyenziswa ekhaya naseofisini.
I-Sunetex yeeMoto eziValiweyo zeFestile zokuVala iLindle yenye yeemfama zethu ezizizimumu. Inokugcina indawo ethe cwaka kuwe. Sinikezela iwaranti yeminyaka eli-10 nganye yezinto zethu. Kwaye ngentsebenziswano yokuqala, sinokunikela ngeesampuli kuwe. Sine-MOQ encinci, ukuba iodolo yakho inkulu, siya kukucwangcisela imveliso, iya kufuna malunga neentsuku ezingama-30 ukuyivelisa. Ukuba iodolo yakho incinci, ungakhathazeki, sinesitokhwe esiqhelekileyo sokuthengisa izinto ezishushu.
Roller Blind amakhethini Ilaphu Semi Blackout
Iimveliso zeSunetex Jacquard Roller Blinds Fabric Blackout Series zenziwe nge-100% ipholiyesta enomgangatho ophezulu. Sinikezela amalaphu jacquard ngeendlela ezahlukeneyo ukutyabeka. Indlela kabini ukutyabeka ukutyabeka ubuso ungenza amalaphu semi ezimnyama, amagwebu indlela mhlophe ukutyabeka ungenza amalaphu mnyama. Iimveliso zethu zilungele isikolo, iofisi kunye nasekhaya.
Iimveliso zethu zijolise ekwenzeni ubomi bakho bube ngcono. Iimveliso zethu ukuxhathisa uxinzelelo kunye nobomi benkonzo ende, ngokubhekisele ekusebenzeni ngobuchule kakhulu, ukusebenza kwe-shading kukwalungile kakhulu, ipateni ijongeka intle kakhulu, ilula kwaye inesitayile, kulula ukuyifaka. Ngexabiso elifikelelekayo, iimveliso zethu zithandwa phakathi kwabathengi bethu. Singabonelela ngeesampulu zasimahla!
Imfashini yeSmart Window Blind Fabric
I-Sunetex Semi Blackout Window Fabric White Coating yenziwe nge-polyester esemgangathweni olungileyo. Inesiphumo esihle se-shading kwaye inokuthintela ngokufanelekileyo ukukhanya okuqinileyo kunye nemitha ye-ultraviolet. Sinemibala eyahlukeneyo kunye nobubanzi obahlukeneyo kukhetho lwakho.
Ilaphu lethu linobungqina beoyile kwaye alinamanzi, kulula ukuba licoceke, lome xa sele ucolile. Kwaye inesakhono esihle ekufiphiseni kwaye inefuthe lokungenisa umoya. Sine-MOQ encinci, ukuba iodolo yakho inkulu, siya kukucwangcisela imveliso, iya kufuna malunga neentsuku ezingama-30 ukuyivelisa. Ukuba iodolo yakho incinci, ungakhathazeki, sinesitokhwe esiqhelekileyo sokuthengisa izinto ezishushu. Sinokubonelela ngeesampulu zasimahla zakho ukuba ujonge umgangatho kunye nombala.
Umdaka omdaka onguMfama oBumfama oBubuso obuDibeneyo
I-Sunetex Slubby yarn Blind Fabric yenziwe nge-100% yeepolyester amalaphu amnyama amnyama anomgangatho ophezulu. Sinokubonelela nge-200/230/250/300/300 cm ububanzi obuhlukeneyo ngefestile yakho, kwaye ubude obuqhelekileyo ziimitha ezingama-40 kuluhlu ngalunye. Iimveliso zethu zilungele iofisi, isikolo kunye nasekhaya. Sineentlobo ngeentlobo zamalaphu onokukhetha kuzo, unokukhetha nayiphi na.
Singumvelisi oqeqeshiweyo kumalaphu amakhethini ngaphezulu kweminyaka eyi-16. Ngendlela yokuvelisa phambili, amandla ethu emveliso anokukhuphisana, ixesha lokuvelisa lifutshane kakhulu. Ukuqinisekisa ukuba sikunika iimpahla zethu ezigqibeleleyo, senza uhlolo lwe-100% kwiimveliso zethu. Sine-MOQ esezantsi, Sinokucwangcisa ukuhanjiswa ngokukhawuleza kwimeko yokuba sinesitokhwe. Singabathengisi beevenkile, iimveliso zethu zikumgangatho olungileyo kwaye ixabiso liyakhuphisana. Ukusebenzisana kokuqala, sinokunikela ngeesampuli zamahhala kuwe.
I-Smart Home Roller Blind Fabric ePhakamileyo ePhakathi
Ilaphu le-Sunetex Blackout Roller Blind ilaphu lenziwe nge-100% ipholiyesta enomgangatho ophezulu kunye nabalinganiswa abalungileyo. Izinto ezisemgangathweni zepolyester zinokuyenza ibe yomelele, kungabikho mngundo, kungabikho moth, kungabikho deformation, akukho mkhondo emva kwexesha elide usetyenziswa.Ngobuso obunemibala emibini yobuso bendlela yokutyabeka, kuyenza ibe nefuthe elihle ekugcineni ukukhanya kunye nokukhuselwa kwabucala.
Iimveliso zethu ukuxhathisa uxinzelelo kunye nobomi benkonzo ende, ngokubhekisele ekusebenzeni ngobuchule kakhulu, ukusebenza kwe-shading kukwalungile kakhulu, ipateni ijongeka intle kakhulu, ilula kwaye inesitayile, kulula ukuyifaka. Iimveliso zethu zijolise ekwenzeni ubomi bakho bube ngcono. Ngexabiso elifikelelekayo, iimveliso zethu zithandwa phakathi kwabathengi bethu. Singabonelela ngeesampulu zasimahla!
Ilanga lokufiphaza i-Roller Blind Semi Blackout Ilaphu
Ilaphu leSunetex Semi Blackout Roller Blind Fabric yenziwe ngeplastester enomgangatho ophezulu kunye nabalinganiswa abalungileyo. Iimveliso zethu zikumgangatho olungileyo, yomelele, akukho mngundo, kwaye akukho nundu. Sinemibala yodidi olukhethiweyo lwakho. Into nganye inembonakalo entle, intle, inesisa, kwaye iyabukeka. Sinokubonelela nge-230cm kunye ne-300cm ububanzi obahlukeneyo onokukhetha kuyo. Ubunzima belaphu lethu yi-118gsm ngeemitha zesikwere, kwaye sineentlobo ezahlukeneyo zokhetho lwakho, unokukhetha nabani na.
Ngendlela yokudibanisa, eyenza ukuba ibe nefuthe elihle ekungeniseni umoya kunye nokukhanyisa. Inokukunceda ugcine amandla. Yinto efanelekileyo kakhulu esikolweni, ekhaya naseofisini. Singumboneleli wokuqala wefektri, ukuba uyasebenzisana nathi, unokuba nomda omkhulu. Ukusebenzisana kokuqala, sinokunikela ngeesampuli zamahhala kuwe!
Ilanga lokufiphaza i-Semi Sout Blackout Roller Blinds Fabric
I-Sunetex Ilanga lokufiphaza i-Semi Blackout Roller Blind Fabric yenziwe nge-polyester, sineendidi ezahlukeneyo zamalaphu ozikhethele. Yamkelwa ngamalaphu anobungane kwindalo esingqongileyo, ayityhefu kwaye ayinambitheki eyenza imeko entle kuwe. Ifanelekile iFrench Window. Unokuba neendlela ezahlukeneyo zokufaka, ezinje ngokuFakwa kweSiling, ukufakelwa kwangaphandle, ukufakwa ecaleni kunye nokunye. Kulula ukuba uyifake.
Iwindow yekhethini yengubo 100% yePolyester
Ilindet Window Curtain Fabric 100% Iimveliso zePolyester Series zenziwe nge-100% ipholiyesta enomgangatho ophezulu. Sinikezela amalaphu jacquard ngeendlela ezahlukeneyo ukutyabeka. Indlela kabini ukutyabeka ukutyabeka ubuso ungenza amalaphu semi ezimnyama, amagwebu indlela mhlophe ukutyabeka ungenza amalaphu mnyama. Iimveliso zethu zilungele isikolo, iofisi kunye nasekhaya. Wamkele imiyalezo yakho!
Iqela le-Ltd, ngumenzi wobuchwephesha kumalaphu amfamekileyo ngaphezulu kweminyaka eli-16. I-Sunetex yenye yeemveliso zethu ezithandwa kakhulu kwinkampani yethu. Sinikezela amalaphu mqengqeleki mqengqeleki, iqwarhs amakhethini, amakhekhe zobusi, amakhefu nkqo njalo njalo. Sinokukunika iisampulu zasimahla kuwe.
I-China Factory Roller Blinds Fabric Semi icinyiwe
IMagicalTex Roller Blinds Fabric yenye yeemveliso zethu ezishushu zokuthengisa. Yenziwe ipholiyesta esemgangathweni ophezulu kunye nexabiso elifanelekileyo. Zomelele kakhulu, ubomi bazo bunokuba yiminyaka eli-10. Ngomgangatho olungileyo kunye nenkonzo ebalaseleyo, sithandwa kakhulu phakathi kwabathengi bethu. Sinikezela ngenkonzo yeeyure ezingama-24 kubathengi bethu ukuba bakuxhase.
Ilaphu lethu lihlala ixesha elide, akukho sibumbeko, akukho nundu, akukho deformation, akukho mkhondo emva kwexesha elide le-usag kwaye akukho lula ukuyenza mibi. Silawule ngokungqongqo umgangatho, siya kususa amalaphu aneziphene kwinkqubo yethu yemveliso. Sijonge ukubonelela kuphela amalaphu afanelekileyo kubathengi bethu. Sinokunikezela ngeesampuli zasimahla kuwe ngentsebenziswano yokuqala!
I-China Supplier I-Wholesale Blind Fabric Semi Blackou
I-MagicalTex Roller Blind Fabric yenziwe nge-polyester, sineentlobo ngeentlobo zamalaphu onokukhetha kuwo. Ngobuchwephesha bokusika obuphambili be-ultrasonic, ayenzi ukuba iburr emaphethelweni, intle kakhulu. Ifanelekile iFrench Window. Unokuba neendlela ezahlukeneyo zokufaka, ezinje ngokuFakwa kweSiling, ukufakelwa kwangaphandle, ukufakwa ecaleni kunye nokunye.
Ilaphu lethu lihlala ixesha elide, akukho sibumbeko, akukho bhabhathane, akukho deformation, akukho mkhondo emva kokusetyenziswa kwexesha elide kwaye akukho lula ukukhubazeka. Silawule ngokungqongqo umgangatho, siya kususa amalaphu aneziphene kwinkqubo yethu yemveliso. Sijonge ukubonelela kuphela amalaphu afanelekileyo kubathengi bethu. Sine-MOQ encinci, ukuba iodolo yakho inkulu, siya kukucwangcisela imveliso, kwaye ukuba iodolo yakho incinci, ungakhathazeki, sinesitokhwe esiqhelekileyo sokuthengisa izinto ezishushu. Sinokukunika iisampulu zasimahla kuwe!